10 Izindawo Ezihamba Phambili Zokuntywila Emhlabeni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ukuhambela i-Iceland > 10 Izindawo Ezihamba Phambili Zokuntywila Emhlabeni
Ekujuleni kolwandle, kufihlwe kude nempucuko, futhi engathintwanga yisikhathi, kukhona 10 izingosi ezihamba phambili zokudilika emhlabeni. Kusuka ezixhotsheni zamakhorali ezimibalabala nezikhanyayo kuye ekuphahlazekeni komkhumbi weWWII, impilo yasolwandle yasendle, nezimbobo eziluhlaza okwesibhakabhaka, lungiselela amagiya akho okutshuza ngoba lesi sikhathi sokuntywila sesizojabulisa kakhulu okwamanje.
1. Indawo Yokudonsela Ehamba Phambili EChina: Udonga Olukhulu
10 izivakashi eziyizigidi ziya eGreat Wall yaseChina minyaka yonke, kodwa bambalwa kakhulu abaziyo ukuthi bangakwazi ukuntweza nge-scuba dive kwenye yezindawo ezinesithonjana kunazo zonke emhlabeni. Ngenkathi abantu abaningi behamba ngodonga lwama-21o00 km, ukuthwebula izithombe ezinkundleni zokuxhumana, IPanjiji Reservoir yindawo yokuntywila emanzini. IGreat Wall yaseChina iwukuphela kweWonder Yomhlaba, ungangena ungene.
Kungenzeka kungathandeki futhi kube kuhle njengokuntywila e-Indonesia noma eFiji, kepha uzobuyiselwa ngokuphelele ngokubukwa kweGreat Wall yaseChina. Hhayi nje ukuncoma okuzungezile kusuka phezulu, kodwa ukuyithola kwasekuqaleni, kusukela ezitini kuya phezulu, isakhiwo esimi ngxi izinkulungwane zeminyaka, ukusinda kwezinhlekelele zemvelo, amakhosi, nezinguquko kwezepolitiki.
Isikhathi Esikahle Sokudilika:
Ukuntywila kuDonga Olukhulu eChina kungokuhlangenwe nakho okuyinselele nakwabatshuzi abaphambili. Isizathu ukushisa okuphansi, ukufinyelela ubuningi be- 10 kuya ku-11 ° C, ngesikhathi 7 ukujula kwamamitha ehlobo. Ngakho-ke, Isikhathi esihle sokuntywila ku-Great Wall kuphela uma uzilungiselele kahle. Imfuneko eyengeziwe yile ubuncane obuphelile be- 100 ukuze 200 diving for abatshuzi zokuzijabulisa.
2. Isayithi Lokutshuza Elihamba Phambili E-UK: Wales
Ngemihume, 500 ukuphuka, nempilo yasolwandle ebabazekayo, ogwini lwama-wales yindawo emangalisayo yokudilika. Lapha ungangena ngaphezulu kwamamitha angama-50 emanzini weSkomer, noSkokholm, kanye neziqhingi zaseMiddleholm. Ukubonakala kungenye yezinto ezihamba phambili endaweni, ukuvumela ukuthi ubabaze impilo yasolwandle enhle futhi uthole ukuphahlazeka kweWWII uma usemlandweni.
Ngaphandle kokubona kokulala okukhona, I-Wales empeleni iyindawo enhle yokuntywila eYurophu. Ngokwesibonelo, ISkomer Marine Reserve ePembrokeshire ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokutshuza eWales: inhlanzi eyikati, amahlengethwa, ama-slugs olwandle nolwandle, zimbalwa kuphela izidalwa zasolwandle ozohlangana nazo.
3. Best Diving Site In Italy: I-Portofino
nge 20 izindawo ezehlukene zokudilika emanzini, I-Portofino ingaphezu kwe-a idolobha elihle elisogwini eYurophu. Ngaphezu kwamahholo amadolobha amahle, zokudla, namabhishi, ugu lwaseLigurian yindawo enhle yokudilika eYurophu.
Okokuqala, IPortofino Marine Reserve inikeza amadwala amangalisayo kanye nokuphahlazeka kwabaqalayo nabahamba phambili. Okwesibili, isithombe sikaKristu, UKristu Wakwalasha ungomunye wabaphezulu 5 izindawo zokutshuza ePortofino. Kugcine, kodwa hhayi okungenani, ukuphahlazeka kwenyamazane yaseCanada i-MOHAWK kungenye yezindawo ezikhangayo zokudilika e 20-40 amamitha.
ukuze uphethe, Izindawo zokutshuza zePortofino zikulungele ukutshuza kwakho kokuqala, nokuthola okunye okumangazayo isimanga semvelo uma ungumtshuzi onolwazi.
EMilan Kuya ePortofino Ngesitimela
IVenice iya ePortofino Ngesitimela
UFlorence Uya EPortofino Ngesitimela
ITurin Iya ePortofino Ngesitimela
4. Indawo Yokudonsela Ehamba Phambili EFrance: Iziqhingi zaseFrance Guadeloupe
Epharadesi laseCaribbean, iziqhingi i-la Guadaloupe ziyisiqeshana sezulu lokuntywila laseFrance. Leli qembu elincane leziqhingi liqukethe iLa Grande Terre, noPetite Terre, ikhaya lentaba-mlilo, ihlathi lemvula, indawo enhle namabhishi, futhi okubaluleke kakhulu ukuthi enye yezindawo ezingcono kakhulu zokudilika eYurophu.
Iziqhingi zaseGuadeloupe azithandwa njengeBali noma iBelize, kepha impilo yasolwandle lapha izokugcina ungaphansi kwamanzi kulo lonke iholide lakho. ICousteau Marine Reserve iyindawo ehamba phambili yokutshuza eGuadeloupe, ngezilwane nezimbali ezinhle, Imigudu, emihumeni izimfudu, nezinye izindawo eziningi ezifihliwe ze-diver entsha, nakuma-timers okuqala afuna ukujabulela impilo yasolwandle emanzini aseCaribbean.
Isikhathi Esikahle Sokudilika Eziqhingini ZaseGuadeloupe:
Izinga lokushisa lamanzi lihlala ngama-23-28 ° C unyaka wonke eGuadeloupe, ngakho-ke ungafika utshuza noma kunini lapho ufuna khona.
5. Iziqhingi zase-Orkney, Scotland
Ngaphezulu kwezimfunda eziluhlaza, amagquma, futhi izintaba, Iziqhingi zase-Orkney zinomlando wasolwandle omuhle kakhulu emhlabeni. Ngokwezwi nezwi igama elithi, bangu 7 imikhumbi ezansi kwamanzi e-Orkney eScotland. Lezi ziphihlika ezisuka eGerman High Seas Fleet eScapa Flow, e 1919.
Ngaphezu kokuphahlazeka, kukhona izilwane zasendle zasolwandle ezimangalisayo ongazihlola emanzini acwebile. Ngokwesibonelo, Amanzi weChurchill Barriers kanye ne-Yesnaby noma i-Inganess alungele ukubona impilo yasolwandle yasendle.
Isikhathi Esingcono Kakhulu Sokudilika Eziqhingini Ze-Orkney:
Iphasika kuya kuNovemba, lapho izinga lokushisa lingu-13 ° C.
6. Izindawo ezihamba phambili zokuntywila eYurophu: I-Silfra, Iceland
Phakathi kwamazwekazi amabili, enhliziyweni ye IThengvellir National Park, amanzi acacile e-Iceland akulindele ukuthola isipiliyoni esimangalisayo sokuntywila. Izici ezihlukile zokwakheka komhlaba eSilfra zinikela ngemigudu engaqondakali nemihume yabatshuzi abanolwazi.
Into emnandi kakhulu ngokuntywila eSilfra ngukuqhuma. Le ndlela yokutshuza yakhiwa yonyaka 2 Ukuhamba kwamasentimitha amapuleti etektoni aseNyakatho Melika nase-Eurasia. Lokhu kudalwe okokuqala ngemuva kokuzamazama komhlaba, kepha iphephe ngokuphelele ukudilika kulezi zinsuku, ngakho-ke ungaqala ukulungiselela isipiliyoni sokudilika ongasoze wasikhohlwa emanzini ase-Iceland.
Ukujula kokuntywila okuphezulu okuvunyelwe eSilfra kuyinto 18 amamitha.
7. Izindawo Ezihamba Phambili Zokuntywila Emhlabeni: Bali
Amabhishi anesihlabathi azungezile, amathempeli, izintaba-mlilo, amanzi eBali omlingo ayisimangaliso somhlaba ngokwawo. Akungabazeki, IBali yindawo enhle yokuphumula futhi ilungele ukutshuza.
EBali, ungahlukanisa isikhathi sakho phakathi kwezindawo eziningi zokuntywila ngoba zikuyo yonke indawo. Kusuka ezixhotsheni zamakhorali ezimibalabala kuya ezinhlanzi ezinkulu, nemihume ezithombeni zeBuddha ezithandeka ingqondo, IBali ngaphansi kwamanzi umhlaba othokozisayo futhi obabazekayo wokuntywila futhi i-snorkeling.
Isikhathi Esikahle Sokudilika EBali:
UMeyi kuya kuNovemba yisikhathi sokuntywila eBali, futhi isikhathi esihle sokubona iManta Rays ngu-Ephreli kuya kuMeyi.
8. Izindawo Ezihamba Phambili Zokuntywila Emhlabeni: IBlue Hole eBelize
125 amamitha ezijulile, okuyisiyingi esimweni, futhi ngombono omangalisayo wasemoyeni, indawo yokutshuza yeBlue Hole eBelize, ingenye phezulu 10 kumele izingosi zokutshuza emhlabeni. Lo mgodi omkhulu uqhamuka ngqo eLighthouse Reef eBelize, futhi ngokubonakala okuhle, ungazithola usesimweni sokuzilibazisa esingenakulibaleka.
Ngokungafani namanye amasayithi wokutshuza amahle kakhulu ohlwini lwethu, iBlue Hole akuyona ikhaya lezithombe ezibaziwe zaseBalinese, impilo yasolwandle engajwayelekile, noma imifula enemibala. Okutholayo kungukuhlangenwe nakho okuyinselele nokwanelisayo, lokho kuzokuyisa ezingeni elilandelayo le-divemaster.
Isikhathi Esingcono Kakhulu Sokudilika Kwi-Blue Hole:
U-Ephreli kuya kuJuni ungcono kakhulu ekubhekeni oshaka be-whale nokubhukuda.
9. URaja Ampat |: Ukuntywila Ekupheleni Kwezwe
Kugcinwe kude nempucuko kuze kube 2004, URaja Ampat uyipharadesi elifihliwe, etholakala phakathi kwe-Indonesia ne-Australia. Ngenxa yalokhu kutholakala sekwedlule isikhathi, izilwane zasolwandle zasolwandle eRaja Ampat zingenye yezinto zasendle emhlabeni.
Lapho ucwila eRaja Ampat, uzothola ngaphezulu 600 izinhlobo zamakhorali aqinile zizodwa, ngaphezu kwempilo yasolwandle enemibala futhi engaphandle kwalomhlaba. Lo mhlaba oyingqayizivele uphakathi nendawo 4 iziqhingi eziyinhloko: I-Waigei, IBatanta, Salawati, neMisool endaweni ekude eNtshonalanga Papua.
Uma ungumuntu ophakathi nendawo yokuhambela phambili, lapho-ke kufanele nakanjani ubhukhe iholide lakho elilandelayo lokudilika eRaja Ampat.
Isikhathi Esikahle Sokudilika KuRaje Ampat:
Novemba kuya ku-Ephreli ngamazinga okushisa asukela ku- 27 ukuze 30 ° C.
10. Izindawo ezihamba phambili zokuntywila eChina: IShi Cheng Idolobha Lasendulo EQiandao Lake
Ekujuleni kwezinkulungwane eziyizinkulungwane zeLake Islands, esifundazweni saseZhejiang, le idolobha lasendulo kaShi Cheng unamanga. Ekujuleni kwe- 40 amamitha, uzothola izimangaliso zedolobha elilahlekile laseChina. Yize amanzi anolaka nesikhathi sidlulile, izici zokwakha zedolobha, futhi nemininingwane yokhuni igcinwe kahle.
Ngalezi zizathu, idolobha laseShi Cheng liyipharadesi elifihliwe labatshuzi. Abaningi beza ukuthola ubuhle beQiandao Lake, kepha leli dolobha elilahlekile lingesinye sezizathu zokuhamba. Idolobha nesigodi kwagcwala amanzi 1959, kepha kuphephe ngokuphelele ukudilika.
Isikhathi Esingcono Kakhulu Sokudilika eShi Cheng:
Ukuwa, sibonga isimo sezulu esomile nesifudumele.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo olungeke ulibaleke oluya e- 10 izingosi ezihamba phambili zokudilika emhlabeni ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “1o Best Diving Sites In The World” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fbest-diving-sites-world%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)